05/21/12 ~ ကြယ်ပွင့်မြို့တော်
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနှင့် တစ်ခြားသူရဲ့ ip, နိုင်ငံ, သူသုံးတဲ့ browser, နဲ့ အခြား အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်
1:23 PM ကြယ်လေး No comments
ဒီနေ့တော့ ရေးရမှာ ပျင်းတာနဲ့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပါ့မယ် . အခုအချိန်မှာ နည်းပညာထွန်းကားတဲ့ ကာလတစ်ခုပါ . အဲ့ဒီ့တော့ အမြဲတမ်း မိမိကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်မှု လုံခြုံမှုရှိအောင် အမြဲတစေ ကာဗာယူထားရင် ပိုကောင်းပါတယ် . ဥပမာ. ဓါတ်ပုံတစ်ပုံပို့လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ၊ တစ်ဖက်လူက မိမိပို့လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီ့လူက ဘယ်မြို့၊ ဘယ်နိုင်ငံကနေ အခုလက်ရှိ ကွန်ပျူတာကိုသုံးနေတယ် ၊ ပြီးတော့ browser ကို ဘာအမျိုးအစားသုံးတယ် version စတဲ့အချက်အလက် တွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ် . ဒါကိုကျွန်တော်တို့က tracking လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် . ကိုကြည့်လိုက်တဲ့သူက ဓါတ်ပုံကို ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်က နမူနာ အချက်အလက်တွေကို automatic မိမိရဲ့ email ထဲကို ရောက်လာပါတယ် . စမ်းချင်ရင်တော့ http://www.spypig.com ကိုသွားပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါ . လုပ်နည်းကိုတော့ ကျွန်တော်မပြောပြတော့ပါဘူး . အဲ့တော့ ကျွန်တော် တစ်ခုသတိပေးချင်တာက မိမိမသိတဲ့သူ တစ်စုံတစ်ယောက်က မေးလ်ပို့လာရင် ဘယ်တော့မှ အလျင်စလို မဖွင့်ဖတ်ကြပါနဲ့ ၊ ကိုနဲ့မသိရင် ဖျက်ပစ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ၊ အခုအချိန်မှာ mail ပို့လိုက်တာနဲ့ ကို့မေးလ်ကို တစ်ဖက်လူက ဖွင့်ဖောက်လိုက်တာနဲ့ တစ်ဖက်လူ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ email ရဲ့ username နဲ့ password ကိုတောင် သိနိုင်နေပါပြီ၊ အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့က keylogger ကိုချည်းပဲ အတင်းဂရုစိုက်ပြီးတော့ လိုက်ရှာနေပေမယ့် . ကို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကို email ပို့တဲ့စနစ်နဲ့လဲ မိမိရဲ့အချက်အလက်တွေကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ် . ဂရုစိုက်ကြဖို့တော့လိုပါတယ် . program ကိုသုံးပြီး မေးလ်ပို့လိုက်ပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီ့သူရဲ့ id နဲ့ password ကို ယူလို့ရပါသေးတယ် . မယုံမရှိပါနဲ့၊ တစ်ကယ်ခံသွားရနိုင်ပါတယ် .အကောင်းဆုံးက သံသယရှိတဲ့မေးလ်ဆိုရင် မဖောက်ဖတ်ပါနဲ့၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကို သိချင်ဇောနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ iD နဲ့ password တွေ ပါသွားနိုင်ပါတယ် . အောက်မှာ spypig.com ကနေ နမူနာလုပ်ပြလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်မေးလ်ထဲကို ပို့လာတဲ့ အချက်အလက် နမူနာပါ. Ip ကိုတော့ ကျွန်တော် ဖျက်ထားပါတယ် .
Sent by You:Tuesday, October 20, 2009, 2:27:37 PM (GMT +7:00)
3 minutes0seconds ago
Opened by Recipient:
Tuesday, October 20, 2009, 2:31:07 PM (GMT +7:00)
(This email has been opened3times)
Up to3openings are tracked as per your selection
Recipient IP: xxx .xxx.xx.xx
Recipient Browser:Firefox 3.5.3 (Windows)
(Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3)
FBI အဖွဲ့သုံးတဲ့ Wireless Hacking Live-CD ဆိုဘဲ
1:20 PM ကြယ်လေး No comments
ဒါကတော့ ရောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး .. FBI မှာ သုံးဖို့အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ wireless hacking live cd ပါ . ကျွန်တော် လဲ ရရချင်း တင်ပေးလိုက်တာပဲ . ဘယ်လို သုံးရတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ လေ့လာကြည့်လိုက်ပေါ့ ..
Live Cd For Wireless Hacking, Also Used By The Fbi
- Live CD with all the tools you need to hackaWLAN / wireless Access point -
Linux Live-CD - OS runs from CD - 635 mb - .iso
- also used by the FBI …
Both sides must have the same WEP key, which is usuallyatotal of 64 or 128 bits long. A semi-random 24 bit number called an Initialization Vector (IV), is part of the key, soa64 bit WEP key actually contains only 40 bits of “strong” encryption whilea128 bit key has 104. The IV is placed in encrypted frame’s header, and is transmitted in plain text.
Traditionally, crac*ing WEP keys has beenaslow and boring process. An attacker would have to capture hundreds of thousands or millions of packetsâ€”a process that could take hours or even days, depending on the volume of traffic passing over the wireless network. After enough packets were captured,aWEP crac*ing program such as Aircrac* would be used to find the WEP key.
Fast-forward to last summer, when the first of the latest generation of WEP cracking tools appeared. This current generation usesacombination of statistical techniques focused on unique IVs captured and brute-force dictionary attacks to break 128 bit WEP keys in minutes instead of hours. As Special Agent Bickers noted, “It doesn’t matter if you use 128 bit WEP keys, you are vulnerable!”
A semi-random 24 bit number called an Initialization Vector (IV), is part of the key, soa64 bit WEP key actually contains only 40 bits of “strong” encryption whilea128 bit key has 104.
The IV is placed in encrypted frame’s header, and is transmitted in plain text.
လင့်သေသွားမှာစိုးလို့ အမြန်ဆုံးသာ ဒေါင်းကြဗျာ . ရလာတာကို hjsplit နဲ့ ပြန်ဖြေရမှာပါ . ပြီးတော့ CD burn လိုက်ပါ .
Hacking Video Course
1:18 PM ကြယ်လေး No comments
ကဲ hacking ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုများ အောက်မှာ စီဒီ နှစ်ချပ်စာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . နောက်ပိုင်း အားရင်တော့ ကျွန်တော် တစ်ခြားလင့်တွေကနေ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် . အခုတော့ စိတ်မပါလို့ မူရင်း လင့်ကိုပဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် .
###### CD1 Content ######
### Session 1 ###
# Build the Windows® 2000/XP Hacker Tool Analysis Laboratory
### Session2###
### Session3###
###### CD2 Content ######
### Session4###
# Crack Passwords on Windows® and Linux
# Use Netcat, the Swiss Army Knife™ of Hacker Tools
### Session5###
### Session6###
# Understand File Hiding in Windows®
# Analyze Covert Channels Using Covert_TCP
USB thief နှင့် flash drive removal tool များ
1:13 PM ကြယ်လေး No comments
အခုခေတ်မှာ USB stick နှင့် အချက်အလက်များ password များကို ခိုးနေတဲ့သူများ ရှိကြပါတယ် . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာကို keylogger များ ရန်မှ ကင်းဝေးပြီ ဆိုတာနဲ့ပဲ မိမိ password များကို အခိုးခံရမှုအတွက် စိတ်ချရသွားပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ . အခုတစ်နည်းနဲ့လဲ အခိုးခံသွားရ နိုင်ပါတယ် . အခုနည်းက usb stick ကနေ တစ်ဆင့် မိမိ အချက်အလက်များကို ယူသွားနိုင်ပါတယ် . နံပါတ်(၂) USB thief ဆိုတဲ့ program လေးဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါ . ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ အချက်အလက်များကို ခဏလေးနဲ့ ခိုးယူနိုင်တဲ့ program တစ်ခုပါ . USB တစ်ချောင်းကို ကွန်ပျူတာထဲ ထိုးထည့်တာနဲ့တင် အဲ့ဒီ့ကွန်ပျူတာမှာ သုံးတဲ့ password မှန်သမျှဟာ အကုန်လုံး အဲ့ဒီ့ usb stick ထဲကို ရောက်ပါတယ် . browser ကနေ website များကို ၀င်သမျှ username and password အားလုံးက အဲ့ဒီ့ stick လေးထဲကို ရောက်သွားပါတယ် . အဲ့ဒါကြောင့် ဆိုင်တွင် ကွန်ပျူတာ သုံးမည့်သူများ သိထားသင့်တာက မိမိကွန်ပျူတာသုံးတော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ကွန်ပျူတာမှာ usb stick များ မိမိမသုံးခင် ထိုးထားမထားကို စစ်ဆေးပါ . တွေ့ရင် ဖြုတ်ပစ်ကြပါ . ဆိုင်ရှင်များကလဲ မိမိက အသုံးပြုသုအပေါ်ကို ရိုသေတယ် ၊လေးစားတယ်ဆိုရင် မိမိကွန်ပျူတာမှာ usb stick များကို မထိုးနိုင်အောင် အခုဒီ aio tool ထဲမှာပါတဲ့ usb stick remover များထဲက တစ်ခုခုနှင့် ပိတ်ထားပါ . stick ထိုးသုံးချင်တဲ့သူ လာရင် အဲ့ဒီ့ stick ကို စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးခံပါ . ဒါဟာ မိမိက မိမိဆိုင်မှာ လာသုံးမည့် customer များကို take care လုပ်လိုက်တာပါပဲ . လာသုံးမည်သူများရဲ့ stick ကို ဖွင့်ပြီးတော့ usb thief program ထည့်ထားမထား စစ်ဆေးပေးပါ . စစ်ဆေးလို့တွေ့ရင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ . နောက်ရက်မှာ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို ပြန်ရှင်းပေးပါ့မယ် .
အသုံးဝင်ပုံကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ချင်သူများ ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ် .
USB to Ethernet Connector v2.4
USB Copy Notify v1.3.3
USB Safely Remove v.3.31.617
USB Smart Samsung Tool v1.12
ID USB Lock Key v1.2.2
USB Tolls info / Contents
ကဲ အပေါ်ကဟာတွေထဲမှာ program ရှစ်မျိုးရှိပါတယ် . (no.2)USB thief ကတော့ 2009 ခုနှစ်ထုတ်ပါ . USB stick နှင့် အချက်အလက်များကို ခိုးယူတဲ့ program တစ်ခုပါပဲ . နောက်ထပ် ရှိပါသေးတယ် . အလျင်းသင့်ရင် သင့်သလို တင်သွားပေးပါ့မယ် . တစ်ခြား program တွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ usb stick များ မိမိ pc မှာ လာထိုးလို့မရအောင် usb port များကို lock ချထားမယ်မယ် . ပိတ်ထားမယ် . ကဲ သုံးကြည့်လိုက်ပါ . အသုံးပြုနည်းကိုတော့ ရေးမပေးတော့ပါဘူး . သုံးတတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လွယ်ပါတယ် သုံးကြည့်ပါ .
တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုတိုင်း ခံရတဲ့သူနေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ညီလေးတွေ ညီမလေးတွေကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ .
password = www.nyinaymin.com
up4vn.com | Rapidshare | Megaupload | Depositfiles | Mediafire | Ifile.it | Hotfile
Aircrack 2.1 for window
1:04 PM ကြယ်လေး No comments
annku7781@gmail.comးအကို Aircrack 2.1 windows အတွက် ပါတ်ဝေ့ါ တောင်းနေလို့အကို အဲဒါ ကို Keygen ဒါမှမဟုတ် crack file များရနိင်မလား အကို ရှာရတာမူးနောက်နေလို့ ပါ.
တင်တော့တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . wifi ကို ဘယ်လို hack တယ်ဆိုတာကို movie နဲ့ပါ ရှင်းပြထားပါတယ် . စမ်းကြည့်တာတော့ စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် . ဒါပေမယ့် သူများအကျိုးစီးပွားတော့ ပျက်စီးအောင် မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြီးပြောချင်ပါတယ် . ကိုလဲ သူများနေရာမှာ ၀င်ပြီးတော့ နေကြည့်လိုက်ရင် အရာရာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
Download ifile.it | Mediafire | Zshare
wifi hack ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Aircrack WiFi Hack 2.1 ပါ
1:02 PM ကြယ်လေး No comments
ခဏခဏ မေးပို့ပြီးတော့ မေးလာကြတာ အရမ်းအားနာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်. ဟက်နည်းကိုတော့ ဒီမှာ ဖတ်လိုက်ပါ tutorial လုပ်ပြထားပါတယ်. လုပ်လို့ရတယ် မရဘူးဆိုတာကတော့ လုပ်တဲ့သူရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု့ပေါ်မှာ မူတည်နေလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ. tutorial နဲ့ သေချာမရှင်းပြတာဟာ မရှင်းပြချင်လို့မဟုတ်ဘဲ. မြန်မာပြည်က wifi လွှင့်ပေးပြီး ရောင်းနေတဲ့သူများနှင့် တစ်ခြား wifi လွှင့်ပြီး သုံးနေရတဲ့ သူများအတွက်ကြောင့်မို့ tutorial movie ဖိုင်နဲ့ မရှင်းပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲ့အတွက် နားလည်ပေးနိုင်လိမ့် မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်. ပို့စ်တစ်ခု တင်ဖို့ လုပ်တိုင်း အမြဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် စဉ်းစားပြီးမှ တင်ပေးရတာဖြစ်လို့ တစ်ချို့ မှားတာများရှိရင်လည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ကဲတောင်းဆိုထားတဲ့သူများ software ကို အောက်မှာ download လုပ်လိုက်ပါ. ဖိုင်နာမည်လေး နဲ့ version လေးနဲ့ တင်လိုက်တာလေးများ ဘယ်ဖိုင်ကိုမှ မဖျက်ခိုင်းပါဘူး ဆိုတဲ့ညီငယ်များအတွက် ဖျက်ခိုင်းတယ်၊ တကယ်ဖျက်ခိုင်းလို့လဲ mediaifre ကနေ ဖျက်လိုက်ပြီဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်. ဖိုင်တွေကို ဘာလို့ ၀ှက်ထားရသလဲ ဆိုတာကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်.
Download mediafire | ifile.it | mirrorcreator
Desktop icon ပြောင်းတဲ့ XUS desktop v1.8.77
12:59 PM ကြယ်လေး No comments
ဒါကတော့ desktop က folder တွေနဲ့ ဖိုင်တွေ software တွေကို ဒီဇိုင်းပြောင်းတဲ့ desktop icon ကိုပြောင်းတဲ့ software ပါ. သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. ကဲအားလုံးပဲ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. အထဲမှာ ထည့်ဖို့ keygen ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်. လိုချင်ရင် download လုပ်လိုက်ပါ. စက်လေးခြင်းဘာခြင်း မရှိပါဘူး. ပေါ့ပေါ့ပါးပါး software ဖြစ်ပါတယ်. ကဲအောက်မှာ ယူလိုက်ကြပါ။
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံနှင့် တစ်ခြားသူရဲ့ ip, နိုင်ငံ, သူသုံ...
wifi hack ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Aircrack WiFi Hack 2.1...